Iran: Bilaogera nogadraina noho ny alikan’ny filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 1:50 GMT
Reza Valizadeh, 32 taona, mpanao gazety sady bilaogera no lasibatry ny fitoriana avy amin'ny biraon'ny filoham-pirenena Iraniana ary voasambotra tamin'ny 26 Novambra 2007.
Bilaogy sy vohikala Iraniana marobe no nilaza fa ny antony lehibe nisamborana azy dia satria nanambara izy fa nividy alika miisa efatra avy any Alemaina amin'ny vidiny mitentina 150.000 dolara tsirairay ny ekipa mpiaro an'i Ahmadinejad.
Nandritra ny volana maromaro dia nanao famoretana tamin'ireo tompon'alika ny manampahefana Iraniana ary nisambotra ny alikan'izy ireo, ary nilaza izy ireo fa maloto araka ny finoana Islamo ny alika.
Nisy zavatra nahaliana nitranga tao am-ponja. Nofafan'i Valizadeh ny lahatsorany momba ny alikan'i Ahmadinejad ary nanoratra iray hafa izy hanazavana ny fomba fijeriny momba ireto alikan'ny filoha ireto.
Nilaza i Valizadeh fa tsy nasehon'ny mpanohitra ny governemanta sy ny mpanohitra ny Repoblika Islamika, ny bilaogy ary ny onjam-peo araka ny tokony ho izy ny momba ireo alika ireo. Hoy ilay bilaogera nanampy :
… Voalohany, amin'ny maha mpanao gazety ahy dia nikasa fotsiny ny hanome vaovao momba ny lohahevitra iray mahaliana aho. Faharoa, heveriko fa tsy fahalemena ny fampiasana ireo alika ao amin'ny ekipa misahana ny fiarovana ny filoham-pirenena fa ny mifanohitra amin'izany, mampiseho ny firosoan'ny firenena mankany amin'ny teknolojia sy ny fandrosoana izany. Fahatelo, misy mpitondra fivavahana (Ulama) sasany mieritreritra fa azo ampiasaina amin'ny antony fiarovana ny alika.
Nofintinin'i Valizadeh fa vaovao mahaliana fotsiny ihany izany ary tsy nikasa ny hanimba an'i Ahmadinejad izy. “Izy no filohantsika manana ny lafiny tsara sy ratsy rehetra,” hoy ilay bilaogera nanoratra.
“Fotoanan'ny fibabohana toy ny mahazatra”
Nilaza i Iran Watch fa nanoratra i Shahram Rafizadeh, mpanao gazety sady bilaogera, hoe nafindra avy ao amin'ny fonjan'i Evin nankany amin'ny fonjan'i Ghazal Hesar i Valizadeh ny Asabotsy hariva, ary navela hiray efitra tamin'ireo mpidoroka zava-mahadomelina. Nanampy i Rafizadeh fa nianaran'ireo mpanao fanadihadiana momba ny aterineto sy ny fomba fanoratana bilaogy ny telo taona farany.
Nilaza i Fardablog fa gadra politika maro no voatery nanao fibabohana diso ary nampiany hoe :
Ao Iran, niseho tao amin'ny fahitalavitra mba “hiaiky heloka sy hibebaka” ireo gadra politika. Noterena hanoratra taratasy ny sasany. Mahaliana fa misy karazany maro ny fiaiken-keloka sy ny fibebahana ! Tsy mila miseho ao amin'ny fahitalavitra ny bilaogera na manoratra taratasy! Manoratra lahatsoratra vaovao fotsiny izy ireo!
Nanoratra i ZaneIrani fa nanambara ny Filoha Ahmadinejad fa tsy handray anjara amin'ny Lalao Olaimpika i Iran. Nomarihany fa, “Efa nandao ny firenena sahady izay rehetra afaka mihazakazaka, mitsambikina, na milomano.”
Niely ny vazivazy nandritra ny fisamborana an'i Reza Valizadeh, ilay bilaogera izay namoaka ny halafon'ny alika novidian'ny filoha Iraniana Ahmadinejad. Novidiana tany Alemana tamin'ny vola mitentina 600.000 $ ireo alika miisa efatra ireo na dia teo aza ny antson'ny Sojabe Alemà Angela Merkel amin'ny fampiharana ny sazy ho an'i Iran.